चिन्तन : ओशो, धर्म र यौ'न !
चिन्तन : ओशो, धर्म र यौ’न !
स्वामी सुवास चन्द्र, काठमाडौं । आनन्द छ, आफूभित्र बाहिर खोज्दा भेटिँदैनन्, धन, पद जति जोड तृष्णा कहिलै मेटिँदैनन् । धर्मले मानवको कल्याण गर्नुपर्दछ। कल्याणको अर्को नाम नै धर्म हो । धर्मको समष्टिगत स्वरूप नै कर्तव्य हो ।
संसारमा जन्म लिएका वा अस्तित्वमा रहेका हरेकले आ–आफ्नै प्रकारका धर्म निर्वाह गर्नुपर्दछ । सूर्यको उदाउने–अस्ताउने क्रिया होस् वा नदी निरन्तर बग्ने वा हिमाल अटल भएर ठडिरहने क्रिया नै किन नहोस् सबैले आ–आफ्नो ठाउँबाट भूमिका निर्वाह गरिरहेकै छन् ।
त्यस्तै, हामी पनि हिन्दू, बौद्ध, इस्लाम, क्रिस्चियन आदिका अनुयायी बनेर एकएकथरी धर्म अँगालेका छौँ भन्छौँ । कोही मन्दिर, कोही मस्जिद, कोही गुम्बा त कोही चर्चमा ईश्वर रहेको महसुस गर्छौं ।
तिनै ईश्वर प्राप्तिका लागि भनेर पूजापाठ गर्ने, खसीबोका, हाँसकुखुरा बली दिने गर्छौं । कोही मूर्तिका सख्त विरोधी छौँ त कोही अन्धभक्त छौँ । हिन्दूले लक्ष्मी माता मानेर पूजा गर्ने गाई मुस्लिमको अल्लाह खुसी पार्ने आधार बन्छ । यसप्रकार विरोधाभाषी क्रियाकलापमार्फत हामी मान्छे कर्तव्य निर्वाह र धर्म प्राप्तिको मार्गमा सरिक छौँ । फलस्वरूप धनजनको स‌हार गर्ने धर्मयुद्ध भएका छन्, भइरहेका छन् ।
कुनै कुरा नसोची, कुनै विचार नगरी, कुनै कुराको चाहना र कामना नगरी सिर्फ श्वासप्रश्वासको आउने जाने प्रक्रियामा साक्षी भएर हेर्दै जाने हो भने एउटा क्षणमा पुगेर निर्विचार साक्षी भावलाई समात्न सकिन्छ ।
धर्मको प्रचार र रक्षार्थ भनी खर्चिला यज्ञयज्ञादि, तीर्थयात्रा, गोष्ठी, सम्मेलन आदि भइरहेकै छन् । र, पनि न मानवसंहार रोकिएको छ, न त धन विनाश थामिएको छ ।
आजका मान्छेका मनमा लोभ, पाप, जालझेल, षड्यन्त्र, स्वार्थ, तेरो–मेरोको निकृष्ट भाव, क्षुद्रता, अह‌ंकार र इर्ष्या जागा अवस्थामा छ । कलुषित भाव, कामेच्छा, मद, मात्सर्य, दुष्टता, पापाचार, दुराचार, अनाचारजस्ता कुभावनाले गर्दा मानवता नै हराउन थालेको छ ।
मन फर्काउन चित्तशुद्धिको अभियानमा सरिक रहनु आवश्यक हुन्छ । यसका अनगिन्ती मार्गमध्ये ध्यान, योग, प्रणायमको मार्ग एक महत्वपूर्ण मार्ग हो । ओशो विचार र वर्तमान ध्यान भनेको ऊर्जा, उत्प्रेरणा, स्फुरण र उर्बरताको अर्को नाम हो ।
ध्यानसाधना पथमा डुबुल्की लगाउनेले जीवनमा असीम अनुभूति आर्जनका संयोगहरू प्राप्त गर्छ । ध्यान गर्ने पनि छुट्टै किसिमको विधान छ । कुनै कुरा नसोची, कुनै विचार नगरी, कुनै कुराको चाहना र कामना नगरी सिर्फ श्वासप्रश्वासको आउने जाने प्रक्रियामा साक्षी भएर हेर्दै जाने हो भने एउटा क्षणमा पुगेर निर्विचार साक्षी भावलाई समात्न सकिन्छ ।
चन्द्रमोहन जैन नामले बाल्यकालमा चिनिएका ओशो ११ डिसेम्बर १९३१ मा भारतको मध्यप्रदेश, जवलपुरमा जन्मेका र १९ जनबरी १९९० मादेह त्याग गर्न पुगेका ध्यान, योग, प्रणायम र सशक्त विचारबाट विश्वलाई नै बिउँझाउने एक दार्शनिक ओशोले मान्छेलाई सरल र सहज तवरले जिउने कला सिकाएका छन् ।
उनले हाँसोको माध्यमबाट मान्छेभित्रको आनन्दलाई उपयोग गर्न सकिने कुरा बताएका छन् । उनले परिस्थितिलाई होइन, मनस्थितिलाई बदल्न र जीवनदेखि डरले भागेर होइन, जागेर होससहितको कृत्यमा सरिक हुनुपर्ने जनाएका छन् । होस नै पुण्य र बेहोसी नै पाप भन्ने उनको दार्शनिकताको मूल पाटो हो । करिब ६ सय ५० पुस्तक ५० भन्दा बढी भाषामा प्रकाशन गरिसकेका ओशोले विविध विषयमा आफ्ना विचार प्रकट गरेका छन् । प्रस्तुत छन्, तीमध्ये वर्तमानलाई पक्रने केही विचार
मृ’त्यु– ‘मृ’त्यु छँदै छैन । मृत्यु एउटा झुट हो । मात्र भ्रान्ति हो । तिमी बच्चा थियौ, तन्नेरी भयौ । त्यो बच्चा कहाँ गयो ? मर्यो ? तन्नेरी थियौ, अब बूढो भयौ । त्यो तन्नेरी कहाँ मर्यो त ? जसरी मानिसको उमेरअनुसार रूप परिवर्तन हुँदै जान्छ, मृ’त्यु पनि रूप परिवर्तन मात्र हो । शरीरबाट आत्मा अलग हुने प्रक्रिया मात्र हो । शरीर पहिलेदेखि नै मृ’त हो, अब मृ’तको कसरी मृ’त्यु हुन्छ ? आत्मा अमृत हो । अब अमृत त कहिल्यै म’र्ने कुरा आएन । भनेपछि यहाँ मृ’त्यु कतै छैन ।’
क्रा’न्ति– ‘अहिलेसम्म हाम्रो के सोचाइ रह्यो भने क्रान्ति दुईचार वर्षमै होस् । यो बेबकुफी हो । व्यवस्था र शासन बदलेर केही हुँदैन । मानिसको मन बदल्नुपर्छ । त्यसका लागि समय लाग्छ । क्रान्तिको नाममा हठात् सबै कुरा बदल्नेहरूले पहिला समाजको मन बदल्न सक्नुपर्छ । यदि कुनै मुलुक सय वर्षसम्म क्रान्तिकारी हुने हिम्मत जुटाउन सक्दैन भने उसले क्रान्तिको झन्झटमै पर्नु हुँदैन ।’
पा’खण्ड– ‘जो सहजताका साथ बाँच्छ, जसको कुनै आदर्श हुँदैन, जो आफ्नो स्वभावमा बाँच्छ, उसको जीवन पाखण्ड हुँदैन ।’
से’क्स– ‘से’क्स परमात्माको शक्ति हो । आनन्दको द्वार हो । मैथुनको समयमा मन विचार शून्य हुन्छ । सोही विचार शून्य अवस्था नै आनन्दको वर्षाको कारण हुँदो रहेछ र म भन्छु, जुन रसको अनुभूति सेक्सको समयमा हुन्छ, त्यो विनासेक्स पनि बर्सिन सक्छ । त्यो सूत्र हो ध्यान । त्यसैले म से’क्सको शत्रु हुँ । तर मेरो शत्रुताको अर्थ के होइन भने म से’क्सको निन्दा गर्छु । मेरो शत्रुताको मतलव के हो भने म सेक्सलाई रूपान्तरण गर्न चाहन्छु । से’क्सको निन्दा गर्ने होइन, बरु काम ऊर्जालाई राममा परिणत गर्ने हो ।’
जीवन – ‘जीवन नै परमात्मा हो र जीवन नै मोक्ष हो । जुन मानिस जिउने कला जान्दछ, जीवनको गहिराइमा तैरिन र उचाइमा पुग्न सक्छ । त्यस मानिसले कहिल्यै सोध्ने छैन कि जीवनको लक्ष्य के हो ? उसलाई त जीवन नै पर्याप्त हुनेछ ।’